China yakajeka pamusoro peUS rutsigiro rweTaiwan's UN bid
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » China yakajeka pamusoro peUS rutsigiro rweTaiwan's UN bid
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Taiwan Kupwanya Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
China yakajeka pamusoro peUS rutsigiro rwekutora chikamu kweTaiwan kuUnited Nations
Mutauriri wechinangwa chisingaperi cheChina ku United Nations yakazivisa kuti United States 'UN basa' rakakanganisa zvakanyanya zvinhu zveChina zvemukati 'nekutsigira pachena TaiwanChido chekutora chikamu muUnited Nations.
“MuTwitter musi wa1 Chivabvu, mamishinari eUnited States kuUnited Nations akapa rutsigiro pachena kudunhu reTaiwan nekutora chikamu muUN. Inopindira zvakanyanya mune zvemukati meChina uye zvinokuvadza zvakanyanya manzwiro evaChinese 1.4 bhiriyoni, "akadaro mutauri.
"Basa reChinese rinoratidza kutsamwa kwakasimba uye kupokana kwakasimba," akadaro mutauri.
“Kune China imwe chete pasi rose. Hurumende yePeople's Republic of China ndiyo yega yepamutemo hurumende inomiririra China yese, uye Taiwan inzvimbo isingabvisike yeChina, "akadaro mutauri.
"Mishinari yeUS haina mukana wekutaura kudunhu reTaiwan nechikonzero chekugamuchirwa kweUN nemaonero akasiyana siyana," akadaro mutauri.
"Kumanikidzwa kwezvematongerwo enyika neUnited States panhau ine chekuita nezvakakosha zveChina kuchakanganisa mamiriro ekushandira pamwe kweNhengo dzeNyika panguva iyo kubatana nekubatana kuri kudiwa zvakanyanya. Kuedza kweUSA kutsausa vanhu nekupa mhosva hakuna zvakunobatsira uye hakugone kunyengedza nyika dzepasi rese, "akadaro mutauriri.
Mutauriri akataura zvakare kuti hurumende yeChina 'yakasimba' mukuchengetedza hutongi hweChina nekuvimbika kwenzvimbo, uye haizombozungunuke mukutsunga kwayo kusimudzira zvido zveChina.
"China inokurudzira zvikuru United States kuti irege kumira kutsigira nharaunda yeTaiwan," akawedzera.